राजपाको निर्णयमा राष्ट्रिय राजनीति - Jhilko
भारतमा लोकसभाको निर्वाचन जति नजिकिदै जानेछ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति पनि धमिलो हुनेछ । पाकिस्तान संरक्षित कास्मिरमा भएको घटनामा भारतीय सत्ताधारी दल भाजपाले सोचे जस्तो जनमत भारतमा तयार हुन सकेन । यसको भर्पाइ गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सफाइ कर्मचारीको गोडा धुने नाटकसम्म गर्न भ्याइसकेका छन् ।
सूचना सञ्चारको सहज पहँुचका कारण यस्ता नाटकको पटाक्षेप पनि भइसकेको छ । हिन्दूवादी कार्ड खेल्न त भाजपाले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । तर यतिले नै पनि भाजपालाई पहिलेको स्थितिमा पु¥याउन कठिन छ । यसैले भाजपाले छिमेकमा आफ्नो उपस्थिति देखाएर भारतीय जनमतलाई प्रभावित गर्ने मेलो ल्याउनेछ । त्यसको पहिलो प्रकरण कैलाली हो ।
कैलाली टीकापुरमा भएको घटनालाई लिएर सांसद रेशम चौधरीसहित एक दर्जनलाई आजन्म कारावासको सजाय कैलाली जिल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको छ । यता त्यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टीले ‘पहिचान’को आन्दोलन गर्ने अपिल गरेको छ । यतिखेरै सांसद चौधरीको फैसला आउनु र पहिचानको आन्दोलनमा सहकार्य खोज्नु संयोगमात्र हुन सक्तैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्धा निराकरणका विषय सेबोटेज गर्ने अनेक तारतम्य भइरहेको बेला टीकापुर फैसला आएको छ ।
टीकापुर फैसलालाई जायज मानेर एउटा जनमत तयार गर्ने र यो फैसलालाई नाजायज मान्दै अर्को संकट निम्त्याउने खेल भएको त हैन ? नेपालको जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा थारु जनमतलाई राष्ट्रियताबाट अलग गर्ने तुरुप त छैन यसभित्र ? विगतका राजनैतिक दुर्घटनालाई नियाल्दा यो फैसलाको मार्गबाट पहिचानको आन्दोलनमा धकेलेर मुलुकलाई अर्को संकटमा पु¥याउन खोजिएको त हैन ? प्रश्नहरु बग्रेल्ती छन् ।
केही दिन अगाडि नेका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा विमलेन्द्र निधीले जनकपुरमा प्रदेश नं २ लाई मिथिला भोजपुरा राज्य घोषणा गर्न आव्हान गर्नु प्रसंगवश आएको कुरा मात्र मान्न सकिन्न । संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनका लागि हतारिनु यी सबै घटनाक्रमहरु एउटा राजनैतिक सिक्वेन्समा आएन भन्न सकिन्न । नेपालमा एकथरी उग्र तथा अन्ध–राष्ट्रवादीहरु अहिलेको परिवर्तनलाई खारेज गर्न चाहन्छन् । तिनको इशारामा अस्थिरता निम्त्याउन यस प्रकारको दुर्घटनाको पटकथा तयार गरेको हुन सक्छ । तथाकथित राष्ट्रवादी र गैह्र राष्ट्रवादीको विभाजनको कथामा आधारित नेपालमा संकट निम्ति रहोस । यो परिघटनाले भाजपालाई भने लोकसभा निर्वाचनमा फाइदा पुग्छ ।
नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्ने गरी हुडलो मच्चियोस । राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सापेक्ष सही अडान लिइरहेको केपी सरकारलाई ढालेर आफ्नो कठपुतली सरकारलाई ल्याउने वातावरण बनोस् ।
समाचार समीक्षा ः उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेशसँग अख्तियारले बयान लिने
महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर–भिठ्ठामोड सडकखण्डमा पर्ने खैराचौकमा बिहीबार ११ किलो चाँदीसहित...
रोनाल्डो हात्तीको आक्रमणबाट एकको मृत्यु
रत्ननगर नगरपालिका–७ सौराहास्थित हात्ती प्रजनन केन्द्र नजीक खोरसोर संरक्षित जङ्गलमा...
कोरोना भाइरसको औषधि बन्ने अझै सात महिना लाग्ने
अमेरिकी औषधि कम्पनीहरूले नयाँ कोरोना भाइरसको उपचारका औषधि र खोपहरू विकास गर्न एकअर्कासँग...